विराटनगर । एक जनाको मृत्यु र ६ जना घाइते हुने गरि विराटनगर–४ आयल निगमअगाडि आज साँझ भएको दुर्घटना कारले ओभरटेक गर्दा भएको खुलेको छ ।
विराटनगरबाट इटहरीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश ३ –०१–०२३ नम्बरको रातो कारले सोही दिशातर्फ जादै गरेको प्रदेश नंं. २–०३–००१– ख १७७१ नम्बरको मालवक ट्रकलाई ओभरटेक गर्दा दुर्घटना भएको हो ।
ओभरटेक गर्दा कार ट्रकमा ठोक्किएर सडकमा राखिएको डिभाइटरमा ठक्कर दिएको थियो । कारको ठक्करले उछिट्टिएको डिभाइटरले लागेपछि पैदलयात्री विराटनगर ३ हलेसी टोलका ६० वर्षीय रमेशकुमार पाण्डेको उपचारको क्रममा विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा परी ६ जना घाइते भएका छन् । कारले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएपछि इटहरीबाट विराटनगरतर्फ आउँदै गरेको बा. २ झ ३२६५ नम्बरको नेपाली सेनाको स्कारपियो गाडीलाई पनि क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनमा परी कार चालक सप्तरी राजविराज घर भएका दिलिपकुमार यादव, ब्रमदेव यादव, गिरीराज चौधरी र सुनिता यादव घाइते भएका छन् । उनीहरु सबै कारमा सवार थिए । उनीहरूको उपचार विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज र विराट नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको छ । नेपाली सेनाले चलाएको स्कारपियो र ट्रकको चालक अहिले मोरङ प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी दिपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘तीन वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेको देखिएको छ,’ घटनास्थलमा पुगेका मोरङ ट्राफिकका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक चन्द्र बहादुर खड्काले भने, ‘ओभरटेक गर्दा दुर्घटना भएको देखिएको छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
* यसअघिको समाचारमा कञ्चनबारीमा दुर्घटना भएको र मृतक विराटनगर २ को रहेको समाचार प्रकाशन भएकोले गल्ती सच्याइएको छ
बुधबार, १० कार्तिक, २०७८, रातीको ०८:४५ बजे
निलम फुयल says:
दुर्घटनामा घाइते भएका पैदलयात्रीहरु संखुवासभा घर भएका भोजराज काफ्ले ६५, लगायत उहाँकी श्रीमती, छोरी र नाति अझै नोबेल हस्पिटलमा उपचाररत छन् । अलि डिटेल्स पनि बुझेर लेखौं है महोदय । उनीहरु सबै जेब्रा क्रसिङ्गबाट बाटो काट्ने क्रममा थिए ।